Koofur Afrika: Geerida Winnie Madikizela, afadii hore ee Nelson Mandela – Kasmo Newspaper
Koofur Afrika: Geerida Winnie Madikizela, afadii hore ee Nelson Mandela
Updated - April 2, 2018 5:34 pm GMT
London (Kasmo), Waxaa geeriyootay Winnie Madikizela Mandela oo ahayd afadii hore ee Madaxweynihii hore ee Koofur Afrika, halyeygii weynaa, Nelson Mandela ee geeriyooday sannadkii 2013kii.
Geerida Winnie oo 81 jir ahayd, magaceeda oo buuxa, Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, waxaa Warbaahinta Caalamka u sheegay kaaliyeheedii gaarka ahaa, Viktor Dlamini, in ay ku xijaabatay maanta ‘Netcare Milipark Hospital’ oo ku yaalla Jehannesburg.
Sannadkii 1958kii, Nelson Mandela oo 17 sano ka weynaa ayaa guursaday, waxayna 27 sano oo uu xirnaa dagaal qaraar la soo gashay Rejiimkii Apartheid ee caddaankii tirada yaraa, ilaa soo deyntiisii taarikhiga ahayd, 11kii Febrayo 1990kii.
Iyada qudheeda waxay soo martay marxalado adag iyo cadaadis xoog leh, waxayna kaalin weyn ku lahayd halgankii lala soo galay midab-takoorka iyada oo hoggaanka u soo qabatay garabka haweenka ee Xisbiga ANC (African National Congress).
Waxay ahayd haweeneydii u horreysay, dadka madow ee Koofur Afrika oo qaadata shahaadada Cilmiga Bulshada (Social Worker), waxayna soo qabatay xilal kala duwan oo Xukuumadeed sida Xildhibaan iyo Wasiir ku-xigeenka dhaqanka iyo hiddaha.
Kolleyba muddooyinkii u dambeeyay sumcaddeedii waxaa hareeyay fadeexooyin dhanka siyaasadda iyo sharciga ah, sannadkii 2003 waxaa lagu helay dunuub isugu jira musuqmaasuq iyo dilal. Waxaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi aadag ah oo markii dambe laga khafiifiyay ilaa 3 sano iyo bar shuruudo ku xiranyihiin.
Sannadkii 1992 xiriirkii Nelson Mandela ayaa kala go’ay, sannadkii 1996kiina si rasmi ah ayay u kala tageen, ka dib 38 sano oo guur ah, iyaga oo isu dhalay 2 hablood, Zindziswa iyo Zenani.
Madaxweyne Cyril Ramaphosa iyo wadaadka katooligga, Desmond Tutu ayaa ka tacsiyadeeyay kuna dhoobay ammaan iyaga oo ku sifeeyay in ay ahayd ‘codkii dadweynaha aan codka lahayn’ iyo ‘horyaalkii caddaaladda bulshada’.
Waxaa qorshaysan Tacsi rasmi ah oo lagu sagootin doono 11ka April, halka Aas Qaran lagu wado in loo sameyn doono maalinta Sabtida, 14ka April.